Sat, Jul 4, 2020 at 3:56am
बुधबार, १५ असोज २०७६,	आहाखबर	4.18K
चाडपर्वको नाममा मासु धेरै खाने चलन स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ । मोटो शरीर, रगतमा कोलेस्ट्रोल बढी, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, युरिक एसिड तथा मधुमेह भएका व्यक्तिले सकभर मासु नखानु नै राम्रो हुन्छ । शरीरलाई पच्ने गरी खाना खानुपर्ने पोषणविद् डा. अरुणा उप्रेती बताउँछिन् । पोषणविद् डा. उप्रेती भन्छिन्, ‘खाना खानुअघि स्न्याक्स खाने चलन छ । यसले शरीरलाई असर गर्छ । बरु अलिक बढी खाएको जस्तो लाग्यो भने एक छाक नखाँदा पनि हुन्छ । बालबालिकालाई पनि खुवाउँदा विशेष ख्याल गर्नुपर्छ ।’
घरमै बनाएका परिकार खाँदा शरीरलाई फाइदा पुग्ने भएकाले जतिसक्दो कम मसलायुक्त खाना खानुपर्ने उनले बताइन् । डा. उप्रेतीका अनुसार चिल्लो हालेको खाने कुरा कमभन्दा कम खानुपर्छ । धेरै मसला हालेको खानेकुरा खाँदा विशेषतः मुटुरोगी, युरिक एसिड भएका बिरामीलाई दीर्घकालीन असर पर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् ।
धेरै मसला हालेको खानेकुराहरू खानुहुँदैन । घरमै बनाएको खानेकुरा खाँदा शरीरलाई फाइदा पुग्छ । हामीले प्रयोग गर्ने मासु पुरै स्वच्छ हुनुपर्छ । बजारबाट किनेको मासु हो भने ताजा छ या छैन भनेर किन्ने बेलामै ध्यान पु¥याउनुपर्छ । ताजा मासु रातो देखिन्छ । बासी मासु रङ उडेको र छाम्दा गिलो हुन्छ । धेरै दिन मासु सञ्चित गरेर खानु राम्रो मानिँदैन ।
दसैंमा मादक पदार्थ सेवन सकेसम्म नगर्न डा. उप्रेतीको सुझाव छ । ‘दसैं स्वभावैले खानपानसँग जोडिएको पर्व हो,’ उनी भन्छिन् , ‘तर, दीर्घरोगीले यो पर्वमा अलि बढी ध्यान दिन जरुरी छ र स्वस्थ मानिसले पनि स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै मसलेदार, चिल्लो तथा पिरो खानेकुरा खाँदा ध्यान पु¥याउनुपर्छ ।’
मुटुरोगका चिकित्सकका अनुसार नेपालीको भान्छामा पाक्ने खाने कुरा सामान्य चाडबाडमा मात्र नभई अन्य समयमा पनि मुटुका लागि उपयुक्त हुँदैन । अझ दसैंको समयमा मुटुरोगी तथा उच्च रक्तचापका बिरामीलाई सोझै असर गर्ने रातो मासुका परिकार हुन्छन् । सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनका अनुसार कम चिल्लो मिसिएको खाना खाँदा शरीरलाई फाइदा गर्छ । डा. पुनले भने, ‘दसैंमा चिल्लो बढी खाने चलन छ । अलिक कम चिल्लो हालेको ताजा खानेकुरा खाँदा शरीर